आफुलाई मन परेकी युवतीको मन छिट्टै जित्न चाहानुहुन्छ भने अपनाउनुहोस यस्ता सजिला उपाय ! बिजय तपाईको पोल्टामा पर्छ - E ALL NEPAL
मानिस कस्तो भन्ने उसको चरित्रले दर्शाउने भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा छैन । कत्तिको इमान्दार छ, घरपरिवार प्रति कति जिम्मेवार छ, समझदार छ कि छैन रु आदि कुरामा युवतीहरु धेरै केयरफुल हुन्छन ।अर्को पर्सनालिटीमा ध्यान दिनुपर्छ । कन्फीडेन्टका साथ् आफ्ना कुरा राख्न सक्ने, भाद्र, आत्मविश्वासी, निडर, मिजासिलो आदि गुण भएका पुरुषपर्ती युवती चाँडो आकर्षित हुन्छन ।
अनुहार राम्रो मात्र हुँदैन । उसमा कुनै ट्यालेन्ट हुनुपर्छ । सबैमा कुनै न कुनै खुवी हुन्छ । कोहि गित गाउन सिपालु होला, कोहि लेख्न सिपालु होला, कोही खेलकुदमा, कोही पढाइमा, कोही चित्रकलामा त कोही कुनै विधामा यस्ता प्रतिभाका कारण पनि कुनै युवती तपाइँप्रति आकर्षित हुन सक्छे ।इमान्दार पुरुष युवतीलाई मन पर्छ । प्रेम सम्बन्ध गासिनुपुर्व तपाई कसैको साथि मात्र हुनुहुन्छ भने उसले तपाइको इमान्दारिता जाँचेको हुन् सक्छ ्र कत्तिको इमान्दार छ, घरपरिवारप्रति कति जिम्मेवार छ, समझदार छ कि छैन रु आदि कुरामा युवती धेरै केयरफुल हुन्छन ।
सकेजति खुल्न सक्नुपर्छ । अन्तरमुखी स्वभावका पुरुष शंकास्पद देखिन्छन । आफ्नो सबै विवरण दिन, सुख दुखका कुरा साटा–साट गर्ने , इच्छा, चाहाना र रोजाइबारे जानकारी लिने र दिने गर्नुपर्छ । यस्तो अग्रसरताले आकर्षण बढ्छ ।‘सेन्स अफ ह्युमर’ अर्को महवपूर्ण पक्ष हो। सानातिना समस्या आफै समाधान गर्न सक्ने हुनुपर्छ । कुन समयमा कसरी प्रस्तुत हुने र को सँग कस्तो व्यवाहार गर्ने आदिबारे ख्याल हुनुपर्छ । कसैको ‘कम्पनि’ मा बस्न रुचाउने, खुल्ने छिटै घुलमिल हुने, अरुलाई हसाउन सक्ने हुनुपर्छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
हरेक युगल जोडीले थाहा पाइराख्नुहोस : राती सेक्स किन नगर्ने, बिहान किन गर्ने ? जान्नुहोस पुरा कुरा